ကိုဗစ်အလွန် ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း ဒီလို ဖြေရှင်းပါ။ - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်အလွန် ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း ဒီလို ဖြေရှင်းပါ။
ကိုဗစ်က အခုချိန်ထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နေဆဲပါ။ ကိုဗစ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အသက်တွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ကိုဗစ်က ပြန်သက်သာလာခဲ့ရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေက အတော်လေးများပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ အဖြစ်အများဆုံး ကိုဗစ် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ ပါ။
ကိုဗစ်ကြောင့် ခံစားရတဲ့ အခြားလက္ခဏာတွေ သက်သာလာပေမယ့် ချောင်းခြောက်ဆိုးတာက ကျန်နေတာကြောင့် နေ့စဉ်ဘဝ နေထိုင်မှုမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်က အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့် အဆုတ်ထဲကို ဝင်ရောက်ကူးစက်တာပါ။ ကိုဗစ်က အဆုတ်ကို အဓိက တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ချောင်းဆိုးတာ၊ အောက်ဆီဂျင်ကျတာတွေကို ခံစားလာရတာပါ။
အသက်ရှူတာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်တာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အခုပြောပြခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ အချို့လက္ခဏာတွေက ရောဂါ သက်သာလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် ကိုဗစ် စတင် ကူးစက်ခံရကတည်းက ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာကတော့ သက်သာလာပြီး အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ မပျောက်တာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီချောင်းခြောက်ဆိုးတာက ပြင်းထန်တာမှ မဟုတ်ဘဲဆိုပြီး အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ထားလိုက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရောဂါတိုင်းက နောက်ဆက်တွဲတွေ ရှိနိုင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲတွေကို သေချာလေး ကုသဖို့ကလည်း အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုဗစ်နောက်ဆက်တွဲ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာကို သက်သာစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ကိုဗစ်အလွန်မှာ ချောင်းခြောက်ဆိုးတဲ့ ပြဿနာက ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ခံစားရတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒီပြဿနာကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ကင်းစေဖို့ဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ်။
ရေများများ သောက်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာ ရေအေးသောက်လို့ရသလို ရေနွေးနွေးလေးမှ လည်ချောင်းရှင်းတာ ဆိုသူတွေအနေနဲ့လည်း ရေနွေးနွေးလေး သောက်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ လည်ချောင်းထဲမှာ အစိုဓာတ်ရှိနေစေဖို့ပါ။ လည်ချောင်းခြောက်တာက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာ ပျားရည် တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) သံပရာသီး သင့်တော်သလို ညှစ်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် သေချာလေးမွှေပြီး ခပ်နွေးနွေးလေးမှာ သောက်ပေးပါ။ ဒါက ရေဓာတ်ပြည့်စေသလို လည်ချောင်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲက ပိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ရှူတာက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ အပါအဝင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ အတော်များများကို သက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ ဒါကြောင့် ချောင်းခြောက်ဆိုးနေပြီဆိုရင် ရေနွေးငွေ့လေး ရှူပေးပါ။
အဝကျယ်ကျယ် ဇလုံထဲ ရေနွေးပူပူထည့်ပြီး ထွက်လာတဲ့ အငွေ့ကို တဝရှူပေးပါ။ ပရုတ်၊ ပူစီနံတို့လိုမျိုး ပူရှိန်းရှိန်းလေးနဲ့ လည်ချောင်းရှင်းစေမယ့် အရာမျိုးကို ထည့်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေမှာ ချောင်းခြောက်သက်သာအောင်ဆိုပြီး ထုတ်ထားတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးဘူးမှာ Antitussives, Dry Cough, Cough suppressant စသဖြင့် ရေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးနေတာ ရက်ကလည်း ကြာနေပြီ အပေါ်က ပြောတဲ့နည်းတွေကို သုံးပေမယ့်လည်း မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကို ဆေးဘူးမှာပါတဲ့ အညွှန်းအတိုင်း သောက်ပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
ငုံဆေးတွေက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာကြောင့် လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေပါတယ်။ လည်ချောင်းကို စိုစွတ်စေတာကြောင့် ချောင်းခဏခဏ ဆိုးတာလည်း မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ကိုဗစ်က သက်သာလာပြီး ကျန်နေတဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာကို ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်တာလည်း မသက်သာဘူး။ ချောင်းဆိုးတာအပြင် တခြားလက္ခဏာတွေပါ ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်ပြဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
What DoesaDry Cough Feel Like? Here’s What Doctors Say Amid COVID-19 https://www.prevention.com/health/a31927676/what-does-dry-cough-mean/ Accessed Date9September 2021
Is There (Will There Be)aPost-COVID-19 Chronic Cough? https://link.springer.com/article/10.1007/s00408-020-00406-6 Accessed Date9September 2021
Post COVID-19 – Oxford Health NHS Foundation Trust https://www.oxfordhealth.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/OH-090.20-Post-COVID-Leaflet.pdf Accessed Date9September 2021